Bible Mu Nsɛm Wura a Ɛredɛw - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
NA MOSE aba Horeb Bepɔw ho tɔnn rebɛhwehwɛ wura ama ne nguan. Ɛha no ohuu wura a ɛredɛw, nanso na ɛnhyew!
Mose kae wɔ ne tirim sɛ: ‘Ɛyɛ nwonwa. Mɛbɛn hɔ makɔhwɛ.’ Bere a ɔyɛɛ saa no, nne bi fi wura no mu kae sɛ: ‘Mma w’anim bio. Yi wo mpaboa, efisɛ wugyina asase kronkron so.’ Onyankopɔn na na ɔnam ɔbɔfo so rekasa, enti Mose kataa n’anim.
Afei Onyankopɔn kae sɛ: ‘Mahu me nkurɔfo a wɔwɔ Misraim no amanehunu. Enti mikogye wɔn, na wo na meresoma wo ma woakodi wɔn anim afi Misraim.’ Ná Yehowa de ne nkurɔfo rebɛba Kanaan asase fɛfɛ no so.
Nanso Mose kae sɛ: ‘Menyɛ nipa titiriw biara. Ɛbɛyɛ dɛn na matumi ayɛ eyi? Na sɛ mekɔ a, Israelfo bebisa me sɛ: “Hena na ɔsomaa wo?” Ɛnde dɛn na mɛka?’
Onyankopɔn buae sɛ: ‘Nea ɛsɛ sɛ woka ni. “YEHOWA, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no na ɔsomaa me mo nkyɛn.”’ Na Yehowa de kaa ho sɛ: ‘Eyi ne me din de kosi daa.’
Mose buae sɛ: ‘Na sɛ meka sɛ wo na wosomaa me na wɔannye anni ɛ?’
Onyankopɔn bisae sɛ: ‘Dɛn na ekura wo yi?’
Mose buae sɛ: ‘Poma.’
Onyankopɔn kae sɛ: ‘Fa to fam.’ Na bere a Mose yɛe no, poma no dan ɔwɔ. Yehowa kyerɛɛ Mose anwonwade foforo. Ɔkae sɛ: ‘Fa wo nsa hyɛ wo kokom.’ Mose yɛɛ saa, na bere a oyii ne nsa no, na ɛho ayɛ fitaa te sɛ sukyerɛmma! Na ayɛ te sɛ nea kwata ayɛ no. Ɛno akyi no Yehowa maa Mose tumi ma ɔyɛɛ anwonwade a ɛto so abiɛsa. Awiei no ɔkae sɛ: ‘Sɛ woyɛ anwonwade yi a Israelfo no begye adi sɛ me na mesomaa wo.’
Ɛno akyi no Mose kɔɔ fie kɔka kyerɛɛ Yetro sɛ: ‘Mesrɛ wo, ma menkɔ me nkurɔfo nkyɛn wɔ Misraim nkɔhwɛ sɛnea wɔn ho te.’ Enti Yetro ne Mose dii nkra, na Mose siim kɔɔ Misraim.
Dɛn ne bepɔw a ɛwɔ mfonini no mu no din?
Ka nea Mose hui a na ɛyɛ nwonwa bere a ɔde ne nguan kɔɔ adidi wɔ bepɔw no ho no.
Dɛn na ɛnne bi fi wura a ɛredɛw no mu kae, na na ɛyɛ hena nne?
Bere a Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔno na obedi Onyankopɔn nkurɔfo anim ayi wɔn afi Misraim no, dɛn na Mose kae?
Dɛn na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ sɛ nkurɔfo no bisa no sɛ hena na ɔsomaa no a, ɔnka?
Dɛn na na Mose bɛyɛ de akyerɛ sɛ Onyankopɔn na asoma no?
Kenkan Exodus 3:1-22.
Ɔkwan bɛn so na Mose suahu no ma yenya awerɛhyem sɛ sɛ yɛte nka sɛ yɛmfata dwumadi bi a efi Nyankopɔn hɔ mpo a Yehowa bɛboa yɛn ama yɛatumi ayɛ? (Ex. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)
Kenkan Exodus 4:1-20.
Nsakrae bɛn na ɛbaa Mose suban mu bere a ɔtraa Midian mfe 40 no, na asuade bɛn na wɔn a wɔpɛ sɛ wonya dwumadi wɔ asafo no mu no betumi asua afi mu? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)
Sɛ Yehowa nam n’asafo no so twe yɛn aso mpo a, awerɛhyem bɛn na Mose asɛm yi betumi ama yɛanya? (Ex. 4:12-14; Dw. 103:14; Heb. 12:4-11)